मनोरोग भनेको मनको रोग हो । जब हामीमाथि तनाव हावी भई त्यसले हाम्रो दैनिकीलाई असर पार्छ भने त्यो मनोरोग हो । सामान्य तनाव सबैलाई हुन्छ । तनाव नहुने मानिस हँुदैन । तर, त्यही तनाव बढी हुनु भनेको रोग हो । कहिले विभिन्न कारणले मनोरोग हुनेगर्छ भने कहिलेकाहीँ.....
भर्खरै सार्वजनिक एक अध्ययनले विश्वको सबैभन्दा बढी खुसी देश फिनल्याण्डलाई ठहर्‍यायो । फिनल्याण्ड विश्वकै खुसी देश हो तर धनी होइन । विश्वकै धनी त अमेरिका हो तर त्यहाँ मान्छे किन खुसी छैनन् ? किन अमेरिका खुसी देश भएन ? यसको अर्थ हो खुसीको स्रोत धन मात्रै.....
हामीमध्ये धेरैलाई कहिलेकाहीँ ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ । यो कसैलाई कम हुन्छ भने कसैलाई बढी भएर औषधी नै खानुपर्ने अवस्था आउछ । चिकित्सककहाँ पुग्नेमध्ये अधिकांशको ढाड दुख्ने समस्या भएको पाइन्छ । यो पूरानो समस्या हो । कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिसको.....
हरेकको घरमा औषधी सेवन गर्ने व्यक्ति हुनसक्छन् । कसैले दीर्घरोगको औषधी सेवन गरिरहेका होलान्, कतिले आपतकालिन अवस्थाका । सामान्य दुख बिमारमा पनि हामी औषधी सेवन गर्छौं । तर, औषधी सेवन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी भने ख्याल गर्दैनौं । जसले गर्दा औषधीले.....
धेरै जसो नेपालीको पेवा बनिसकेको ग्यास्ट्रिकले धेरै लाई सताउने गर्दछ । पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्या नै ग्यास्ट्राइटिस हो । छाती र पेटको बीचको भाग वरिपरि दुख्नु, पेट फुल्नु, अम्लपित बढ्नु, भोक हराउनु, मुख बिग्रिनु, ढ्याउ,ढ्याउ.....